Global Voices teny Malagasy » Tonizia: Bilaogera Nirotsaka Hofidiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Septambra 2011 9:04 GMT 1	 · Mpanoratra Afef Abrougui Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Amira Yahyaoui: (@Mira404 )
27 taona, mitarika ny lisitra tsy miankina ao Frantsa, antsoina hoe “Sawt Mostakel” (Feo Tsy Miankina). Mpiaro ny zon'olombelona izy ary nitolona nanohitra ny fanavakavahana nandritra ny fitondran'i Ben Ali. Hoy izy nanambara  momba ny firotsahany hofidiana:
Imen Braham: (@__Imen )
Manam-pahaizana ambony momba ny fambolena sy fiompiana, sy mpiaro ny tontolo iainana izay mino ny fahombiazan'ny governemanta misokatra. Fantatra amin'ny anarana hoe Moonsgirl , 28 taona izy tahaka an'i Amira Yahyaoui, kandidà ao amin'ny lisitra “Sawt Mostakel.” Imen Braham nanambara hoe: 
Mehdi Lamloum: (@MehdiLamloum )
Mpahay momba ny Aterineto no sady bilaogera mpaka sary. Matetika dia mampiasa ny bilaoginy Pink Lemon  izy mba hiresahany momba ny fifandraisana nomerika, Aterineto, sy fampahalam-baovao. Emna El Hammi nanoratra  ny momba an'Andriamatoa Lamloum:
Riadh Guerfali: (@Astrubaal )
Manam-pahaizana momba ny lalàm-panjakana ity mpiara-mitantana ny bilaogy iombonana Nawaat  ity. Mpahay momba ny Lalam-panorenena sy ny Andrimpanjakana politika Andriamatoa Guerfali. Nandritra ny fitondran'i Ben Ali, nampiasa matetika ny bilaoginy Astrubal  izy hanambarana ny fanitsakitsahana ny fehezan-dalàna iraisam-pirenena sy ny fehezan-dalàna ao an-toerana nataon'ny fitondrana teo aloha, nampanantena ny Toniziana izy ny amin'ny zo ahafahana manara-baovao sy hiditra amin’ ny Aterineto. Emna El Hammi nanoratra  toy izao:
Tarek Kahlaoui: (@t_kahlaoui )
Nirotsaka ho fidiana sady kandidà tsy miankina ihany koa izy, ary mitarika ny lisitra antsoina hoe “Sawt Echabab” (Feon'ny Tanora). Mpampianatra ao amin'ny sampana Tantara sy Zavakanto ao amin'ny Oniversite Rutgers ao New Jersey Andriamatoa Kahlaoui. Mpandala ny fanehoan-kevitra an-kalalahana izy izay nanana ny bilaoginy voarara tamin'ny taona 2010. Tamin'ny 8 Septambra, nanambara ny firotsahany ho fidiana tao amin'ny Pejiny Facebook  i Tarhek:
Yassine Ayari: (@yassayari )
Bilaogera, sady mpiserasera mafana fo. Miaraka amin'i Slim Amamou, notanan'ny polisy nandritra ny ora efatra i Andriamatoa tamin'ny 21 Mey 2010, noho ny fikasany hanao fihetsiketseham-panoherana ny fanavakavahana izay saiky notontosaina ny ampitson'ny fisamborana azy. Vao haingana izy no nanoratra lahatsoratra tao amin'ny bilaoginy  antsoina hoe “Tsy bilaogera aho” izay manazava amin'ny mpamaky ny dikan'ny hoe mpamaha bolongana araka ny fijeriny:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/09/21/22758/
 Pejiny Facebook: http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136385469791345&id=50050232357